Posted by krishnamalla01 at 10:08 PM No comments:
सुने–“जे–जे लक्ष्य लेखेर राखिन्छ ती लक्ष्य एक न एक दिन पूरा भइ छाड्छ, मात्र यसप्रति आपूm समर्पित हुनु पर्छ” । उनी उत्साहित भए । हत्त–न–पत्त डायरीमा
लेखे– जीवनभरीमा गर्न मन लागेका सबै कुरा, बुँदेवार, जम्मा–जम्मी १२७ वटा । पछि त्यसलाई ठूलो कागजमा, ठूलै अक्षरले लेखेर आपूm सुत्ने कोठाको भित्तामैं टाँसेर राखे, उठ्नासाथ आँखाले देख्ने गरी । अचम्मको कुरा अहिले उनी बूढा भैसकेका छन् र उनका झण्डै सवै अर्थात् १०९वटा लक्ष्य खेली–खेली पूरा भैसकेका छन् । योभन्दा पनि उदेक लाग्दो कुरा–उनी गोहीको मुखैमा पर्दा–पर्दै पनि जोगिए, अझ उनी एबिलभ क्रासमा परेर पनि बाँच्न सफल भए ! किन होला ? किनभने उनलाई आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्न अझै बाँच्नु थियो र त उनी बाँचिरहे । यस्तै उनलाई २० औँ सताब्दीमैं क्यान्सर भैसकेको थियो तर उनले २१ सताब्दी हेर्ने लक्ष्य लेखे र उनी अभैm जीवितै छन् ! लक्ष्य निर्धारित भए काललाई समेत पछि ढकेल्न सक्ने यो भन्दा ठूलो अरू उदाहरण के पो होला ?
Posted by krishnamalla01 at 10:07 PM No comments:
सफलता र सिद्धान्त
– एप्पल कम्पनीले संसारकै सबभन्दा अनौठो एवं सुन्दर कम्प्युटर निर्माण गर्छ ।
– संसारकै सबैभन्दा बढी व्यापार गरी पैसा कमाउने सफल कम्पनी पनि एप्पल नै हो । सबैलाई पछाडी पार्दै अगाडि आउने एप्पलको निर्णायक शक्ति के होला ? भन्न परोइन विचार अर्थात् दार्शनिक–सिद्धान्त र त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्ने–गराउने लिडर स्टिभ जब्स ।
एप्पलको तीन दर्शन–सिद्धान्त हुन्
१) ग्राहकको पूर्ण संन्तुष्टिको पहल
२) विचारको केन्द्रिकरण र
३) इम्प्युट अर्थात् कलात्मक एवं दरिलो प्रस्तुति ।
पहिलो सिद्धान्तको सम्बन्धमा जब्सको अरूको भन्दा भिन्नै धारणा छ । अरू भन्छन् । ग्राहकले खोजेजस्तो सामान पस्कन सक्नु व्यापारीको सफलता हो । उनी भन्छन् –ग्राहकले खोजेको जस्तो होइन, आफुले जानेको जस्तो सर्वोत्कृष्ठ कुरा दिएर ग्राहकलाई धन्य तुल्याउनु सक्नु व्यापारीको सफलता हो । यसै प्रसंगलाई मध्य नजर राखी उनले हेनरी फोर्डको कुरा कोट्याएका छन् –एकपल्ट फोर्डले भनेका थिए यदि ग्राहकलाई तपार्इंलाई कस्तो वाहन चाहियो भनि सोधियो. भने उसले सबभन्दा छिटो कुड्ने घोडा माग्छ, किनभने (गाडीको अविष्कारअघि) घोडा बाहेक अरू वाहन पनि हुनसक्ने कुरा ग्राहकलाई थाहा हुँदैन, त्यो त आविष्कार गरेर प्रस्तुत गरेपछि मात्र उसले खोज्छ । त्यसैले जब्स भन्छन्– सम्पति कमाउन मात्र कम्पनी स्थापना गर्नु हुँदैन कम्पनी त सर्वसाधारणको जीवन परिवर्तन गर्न स्थापना गर्नु पर्दछ, अतः अरूको उन्नति नै आफ्नो उन्नतिको पहिलो आधारशीला हो ।
दोस्रो सिद्धान्तः केन्द्रिकृत हुनु । कुनै पनि काम गर्दा फाइदा र बेफाइदा दुवै हुन्छ । असफल हुने मान्छेले बेफाइदा–माथि बढी नै ध्यान दिन्छ भने सफल मान्छेले फाइदामा । स्टिभ भन्छन् राम्रो परिणाम ल्याउने नै हो भने केन्द्रिकृत नै हुनु पर्छ र अनावश्यक नकारात्मक संभावनातिर ध्यान दिनै हुँदैन । उदाहरण –दुई जना कैदी झ्यालबाट बाहिर चियाउँछन् । परिणामस्वरूप एकजना खुसी हुन्छ र अर्को दुःखी । किनभने एउटाले आकाशका झिल्मिल तारामा ध्यान केन्द्रित ग¥यो र अर्कोले सडकमा फालिएका फोहोरमा । त्यसैले सुख र दुःखजस्तै सफलता र असफलता पनि दृष्टिकोणकै परिणाम हुन् । अतः सकारात्मक पक्षमा मात्र ध्यान दिई अगाडि बढ्नु सफलताको अर्को पक्ष हो । अन्तिम सिद्धान्त– इम्प्युट अर्थात् थप आकर्षक, कलात्मक एवं व्यावहारीक बनाउनु । जस्तै हामीले पकाएको तरकारी स्वादिष्ट भएर मात्र पुग्दैन हेर्दै खाउँ–खाउँ जस्तो लाग्नु पर्दछ । अनि मात्र त्यो व्यावसायिक बन्छ र त्यसमा थप पौष्टिकता पनि जोडी ग्राहकलाई दीर्घ कालीक फाइदा समेत पु¥याउनु पर्दछ । यही इम्प्युट हो । अतः राम्रै कुरालाई पनि कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नु नै सफलताको तेस्रो पक्ष हो । यिनै दार्शनिक सिद्धान्तका सन्तान हो –एप्पलको सफलता ।
Posted by krishnamalla01 at 10:06 PM No comments:
स्टाण्डफोर्ड विश्व–विद्यालयले गरेको एउटा अनुसन्धानको नतीजाअनुसार कुरा गर्ने हो भने सामान्यमान्छेले आफनो मस्तिष्कको २ प्रतिशतमात्र प्रयोगमा ल्याइरहेका छन् र त उनीहरू सामान्य बनेका हुन् । यस्तै एउटा रिपोर्टअनुसार आइन्स्टाइनको मस्तिष्क भने १२–१३ प्रतिशत प्रयोगमा आएका हुन् त्यसैले सामान्यमान्छे भन्दाभिन्न भई उनी युग–पुरुष बन्न सफल भएका अरे ।
प्रस्टै देखिने कुरा –मस्तिष्कका दुई गोलार्ध छन् तर यी दुवै गोलार्धको कार्य–प्रणाली र क्षमता भिन्ना भिन्नै भएको कुरा भने नोबल पुरुष्कार विजेता अमेरिकी न्यूरोलोजिष्ट डा. रोजर स्पेरीले पत्तालगाएका हुन् । उनैले पत्तालगाएअनुसार दाँया मस्तिष्क कला–प्रधान हुन्छ भने बायाँ तर्क–प्रधान । अर्को शब्दमा भनुपर्दा दायाँ मस्तिष्क भाव प्रधान हुन्छ भने बाँया विचार–प्रधान । र, हाम्रो नियन्त्रण दायाँ मस्तिष्कमाथि विरलै भएको पाइन्छ । जहाँसम्म विचारको कुरा छ अर्थात् बाँया मस्तिष्कको कुरा छ त्यसमा पनि हाम्रो पकड दुई प्रतिशत भएको माथिनै उल्लेख भइसकेको छ । र, विचार–प्रधान मस्तिष्कमाथि नियन्त्रण नभइकन भाव–प्रधान मस्तिष्क (जुन ९० प्रतिशत शक्ति ओगटेर बसेको छ ) माथि नियन्त्रण संभव देखिंदैन । दायाँ–बाँया दुवै मस्तिष्कमाथि नियन्त्रण नभईकन महा पुरुषको जन्म पनि भएको पाईदैन अतः बाँया मस्तिष्कमाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्ने बाटो के होला त ? किनकि यस प्रश्नको जवाफसितै महा पुरुष बन्ने बाटो जो खुल्ले देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा विभिन्न देशका वैज्ञानिकहरूले निर्विवादरूपमा एउटा के कुरा ठम्याउन भ्याएका छन् भने सबै जसो जिनियसमान्छेहरू सानैदेखि हरेक कुरामाथि प्रश्न गर्थे र गर्छन् । यही बारम्बार प्रश्न गर्ने, कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएसम्म प्रश्न जारीराख्नाले बाँया मस्तिष्कको पूर्ण विकास भएको देखियो । अर्को शब्दमा भनुपर्दा कुनै पनि उत्तरबाट तबसम्म चित्त नबुझाउनु जबसम्म तथ्य पत्ता लाग्दैन ।
इतिहास साक्षी छ यूरोपमा पध्रौं–सोह्रो शताब्दीलाई पुनर्जागरण काल भनिन्छ ।
यहीबाट विज्ञान, कला साहित्य सबै विद्याले फड्को मारेका हुन् । यसको श्रेय जान्छ प्रश्न–प्रत्तिप्रश्न जारी राख्दै खोज अनुसन्धान गर्ने ताकतलाई । प्रसंगवश इतिहासकै सबभन्दा बहुमुखी प्रतिभावान् मानिएका लिओ नार्डो दा भिन्चिकै कुरा कोट्याऔँ । त्यत्रो अभूतपूर्ण प्रतिभा उनमा कहाँबाट पलायो ? त्यही प्रश्न जारी राख्ने ताकत । उनी अध्यापकहरुसित यसरी प्रश्नमाथि प्रश्न सोध्थे–कि टिचरहरु नाजवाफ हुन्थे ।
पछि दा भिन्चिले आपूmभित्रको महानप्रत्तिभा विस्फोट गराउने सात अत्यन्त महत्वपूर्णसूत्रहरू छोडेर गए जुन हाउ टू थिंक लाइक लिओ नार्डो दा भिन्चि भन्ने पुस्तकमा समाहित छन् । ती सफलताका सात स्वर्णीम सूत्रमा पनि सबभन्दा महत्वपूर्ण हो – प्रश्न गर्ने बानीको विकास ।
Posted by krishnamalla01 at 10:05 PM No comments:
Posted by krishnamalla01 at 9:50 PM No comments: